Psalmen 84 HTB - Nnwom 84 AKCB
wʼatenae hɔ yɛ ahomeka!
2Me kra pere, mpo ɛtɔ beraw,
sɛ ɔbɛkɔ Awurade adiwo;
me koma ne me honam teɛ mu
frɛ Onyankopɔn teasefo.
3Mpo akasanoma anya ofi,
na asomfena nso anwen ne berebuw,
faako a obesow ne mma
wɔ beae bi a ɛbɛn wʼafɔremuka,
Awurade Asafo, me Hene ne me Nyankopɔn.
4Nhyira nka wɔn a wɔte wo fi;
na wɔkamfo wo din daa.
5Nhyira nka wɔn a wɔwɔ wo mu ahoɔden,
na wɔde wɔn koma fi akwantu ase kɔhwehwɛ wo.
6Sɛ wɔfa Baka Bon no mu a
wɔma hɔ yɛ nsuwansuwa;
asusow bere nsu so taataa hɔ.
7Wɔkɔ no ahoɔden so bere nyinaa,
kosi sɛ wɔn mu biara bepue Onyankopɔn anim wɔ Sion.
8Asafo Awurade Nyankopɔn, tie me mpaebɔ;
Yakob Nyankopɔn, yɛ aso ma me.
9Ao, Onyankopɔn, hwɛ yɛn nkatabo;
fa ahummɔbɔ hwɛ nea woasra no ngo no.
10Wʼadiwo hɔ da koro tena
ye sen nnafua apem wɔ baabi foforo;
mepɛ sɛ mɛyɛ ɔponanohwɛfo wɔ Onyankopɔn fi
sen sɛ mɛtena amumɔyɛfo ntamadan mu.
11Efisɛ Awurade Nyankopɔn yɛ owia ne kyɛm;
Awurade hu mmɔbɔ na ɔhyɛ anuonyam;
ɔmmfa ade pa biara nkame
wɔn a wɔteɛ.
nhyira nka onipa a ɔde ne ho to wo so.
AKCB : Nnwom 84